MUUQAAL: Puntland oo Mooshin laga Gudbiyey Gudoomiyaha Baarlamaanka oo Taageersan Xukuumadda Soomaliya | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Puntland oo Mooshin laga Gudbiyey Gudoomiyaha Baarlamaanka oo Taageersan Xukuumadda Soomaliya
Oct 8, 2019 - 46 Aragtiyood
Garoowe ( Kalshaale ) Wariye Cali Xaraare ayaa Warbixin ku lafa guray Mooshin Xilka qaadis ah oo laga Gudbiyey Gudoomiyaha Cabdixakiin Axmed Dhoobodaareed iyo Sababta ka dambaysa arintaasi.
Boowe pudhleyn waa budhbudhay
the Puntland State of Somalia is a region in northeastern Somalia. Centred on the town of Garoowe in the Nugal ..
speaker slams call to quit as impeachment motion set for debate…
————Waa Maxay Shaqada Baarlamaanka puntland Miyeyse Gutaan Waajibaadkooda…
shaqooyinka Baarlamaanka waxaa ugu waaweyn shan shaqo oo kala ah:
Ka doodidda arrimaha muhiimka ah ee maalin laha ah ee dalka ka jira…
Farxiyo salaan sare.
WARIIRI weli faraqa makuu galay?
Farxiyooy. Maxaa loola jeedaa xoogagag wadaniyiinta farmaajo iyo kheyre.
Ma waxaa jiro qof aan wadani aheyn.
Kacaankii ayaanba soo xasuustay.
Boowe Nimaan Max’uud Saleemaan aheyn uma marxabeyn Karo Villa Xamar.
Buriska iiqabo maahan, Puntland ayaad u dhihikaDHAA kahor imaankaDHAA
* Hagbadle, Laga mudne iyo Korjoogto (waaye DOWLADDA DALKA PUNTLAND EE DALKA SOOMAALIYA ).
Adeer haddii NIN ISAAQ AH Guddoomiye degmo looga dhigahayo degmada HODAN, because of waa ayuu ISAAQ degijirey Hodan,
Waa in sidoo kale Degmada CAYNABO GUDDOOMIYE looga dhigo NIN DHULBAHANTE AH.
Sidaad Caynabo uga samirtay uga samir KAAMBO AXMAARO IYO KAASA BOBOLAARE (Kaasa bal balaare).
* Waxey u joogtaa adeer Ahmed 21 October 1989.
Waxan kuu fahmey inaad booyada xaarka
Ka saarta musqulaha,aad darawal ka tahay.
Waxba xeerin meysid,xishoodna waad ka dhaqaaqdey.
Axmed soomaali kaa wadanisan,kaana waayo-aragsan,kaana qalbi-nadiifsan,taas ogow.
Sidaad u caytameyso ,waanu u caytami karnaa,laakiin weli waxbaa nagu laaban,
Hadey dhaqan TAHAY,muslinimo,soomaalinimo,intuba wey MA xakameynayaan.
Axmed soomaali xurmadle,waa nin xawaadle ah,buuhoodle iyo laascanood, iyo gebiley iyo wajaale,isagaa leh, oo wax laga weydiinayaa,yaa u diidi Kara?.
Cid u diidi kartaa ma jirto waa muwaadin soomaaliyeed,waana xor.
24/7.waxad Ku qarweysaa rag baa luflufkii u muuqdaa,mar hadaad xishoon weyday jawaabtadu waa taan:
Dabshidoow maahmaah soomaaliyeed baa tiri
(Qabsin tuugo bartey qatan).
Waxa kaa degi waayey dawladnimada iyo shumaca yar ee soo iftiimaya.
Calooshadu waxay tebaysaa,isbaaradii,kufsigi,gabdhahii beytariga lagu xeraynayey,bililiqadii,musuqii,intaas markaad weyday baad maryaha dhigatey.
Wixii kaftan iyo xifaalo ah lama diidana
Laakiin cay qaawan kaa yeeli meyno.
Sida maanta kismaayo ugu jirto gacan kenyaati,ayaa caynabo u aheyd saldhigii ingiriiska,iidoorna ingiriis buu duud xamaal u ahaa,isagaana dejiyey caynaba.
Waayo anagu dagaal iyo jihaad baanu kula jirney gaalka balagta leh.
Saaxiiib qori caaradiis leygama qabsan caynaba,.
Ilaahey waa na yaqaan,iidoorna wey na garanayaan_,laakiin adigu nama taqaanid.
Markaa google waxad Ku aragto Ku hadaaq.
Ma adaaba wax reebay waadba dhameysay,
Nalka iyo shumaca wauxuu shidnaa ilaa waqtiguu Shiikh Shariif Xamar doorasho ku qabtey,
Hadda waaba naga kala daatey oo Kismaayo iyo Garowe oo qarka noo saaran ayaa naga sii durqay.
Xamar hoos u dhac ayaa ku yimid
Somaliland waxey ku noqotey meeshii meel ka siidaran,
Farxiyo dalkii iyo dadkii naga kala daadey,
Lkn waa laga yaaba in SHAQSIYAAD HORUMAR u arkaan ADEERKOOD OO MEEL LOO DHIIBEY.
Khasaaro iyo dib u dhac ayaa nagu soo kordhey waana kuu sheegaa ee aan u doodno sidii labo qof oo reer Muqdisho ah, maadaama aan isku meel ka imaaney.
1. Qiimihii dhulka aad iyo aad ayuu hoos ugu dhacey, booskii ahaa $500,000 kun doolar, maanta waa wax ka yar 200,000
Meeshaas waxaa ka yimid in malaayiin doolar oo Xamar loo dirijirey loo diro TURKEY
2. Isu Socodkii Ganacsiga oo xirmay, maxaa yeelay jidadkii oo wada xiran, Qurbo-joogtii oo Turkey u wareegtey
Iyo Holiday Xamar loo aadi jirey oo niyad jab ku dhacey
– Xamar waxaay noqotey LAAN BAXEYSAY OO QORAX QALALISEY.
Dhanka midnimada iyo isu soo dhawaanshaha.
– Kismaayo ninka maamuliwaayey oo Xamar inuu hooskeeno iska daaye u sameyn waayey maamul ay horboodaan OGAADEEN IYO MARIIXAAN MIDEYSAN.
Miyaad iigu sheekayn SHUMAC DANSANAA 2017 ayuu SIINKA DHEER SAAREY, walaashey Runta u dhawoow, ninkii DHULBAHANTE MIDEYN WAAYO- HARTI MA MIDEYN KARO.
– Anigu hadda Farmaajo waxba uma heysto oo shaqadiisii wuu Gabey marba hadduu xakameyn waayey Puntland iyo Jubba
Lkn ninka Xamar ku ridey hoos u dhaca dhaqaale iyo nabad gelyo waa KHEYRE
Ninka Canshuurta gurto aan HAL JIDKA DAYACSITIN WAA KHEYRE
Ninka aan kala jecleyn in Xamar dib u laabato waa Kheyre
– Hadde Farmaajo wuu la qabaa oo nin Qalbi-Dhagax Axmaar u dhiibey
– Nin ONLF Argagixiso ku sheekay
– Nin Kismaayo iyo Garowe maamuliwaayey
“” REER MUQDISHO HAR U JIIDIMAAYO.
* DOORASHO IN LA QABAN DOONO AYAAN WALWAL (Warwar) ka qabnaa EEBAY CADEEY.
Isaaq iyo Somaliland warkooda daaba
Waaba nin ay u joogto wali (SAARKU – DHAANTADU) 1991,
hadduu heysto Diyaarado iyo Hawiye War ka dhageysan HARGEYSA ayuu soo gubi lahaa.
– Sicir baran, Ganjeele jid lagu xiro, Qurbojoog niyad jabto, AYAAN KA FAA’IIDNAY REER QURAC KU MASLAXEE VILLA XAMAR.
* Kurtun lagu sirmay iga dheh.
– Warkii waa intaas walaashey.
Eegay oo eegay oo arkay oo fiiriyay oo u dhabba galay waanan bixin waayay halka danshid tooganayo iyo dagaalkiisu dhanka uu aaddanyahay.
Nin baa wuxuu shalay igu dhahay meeshan Kalshaale dhammaan mucaarad iyo muxaafid siyaasiyiin isku sheegga Soomaalida ayaa wax ku qora, ha ka tagin Youtubers-ka sida.
War dadka Soomaaliyeed isku soo dhaweyn iyo nasteexa ayay maanta idiinkaga baahanyihiine isku dhufasho iyo kala fogaynta ka daaya.
Dawladda ninkii xukuma aniga waxba igama galin, nin walba oo yimaada waan taageerin oo ay damiir waddaninimo ka muuqato. Waxaa muhiim ah in dalakani dawlad helo oo mar saaxada caalamka dib ugu soo noqdo nabad deggenaashana helo.
Bal ninka aan dawlad rabin gacan ha taago car wakaase, ma jrio xaqiiqatan, waa un dahab lumay si u doondoon iyo sidan baa qumman iyo sidan baa qummane bahasha waa la wada goobayaa.
Ha ku indha sarcaadina raggii ku naaxay baabba`a shacabka soomaaliyeed ee u bartay tuubbada iyo naaska musuqa beenta ay dalfinayaan. Wax maanta qabiil isu haysta iyo qabyaalad ma jiraan.
Waa sax ineynu si fiican u doodno,oo wax is fahansiino.
Dabshid anigu marnaba kuma doodin farmaajo wuu saxan yhy100%.
Laakiin ujeedkeygu waxa weeye,dawlad la’aan,dawlad xun baa dhaanta.
Dabshid horta mid ogow ,goboleysiga belaayo inooga horeysay ma jirto.
Marar badan waxad Ku dooday farmaajo tolkii wuu keeni Kari waayey,taas waxan kaa idhi dawladii kacaanka ee xoogga badneyd,dhaqaale,ciidan,dhinac kasta, jabhadihii burburiyey, weeye ragga maanta joogaa jubaland,putland .
Farmaajo tolkii hadey mahbarnimo,iyo jaajuus kenyaati noqdeen,miyuu soo xambarayaa.
Dal iyo dad waxa lagu dhaqaa isu-tanaasul.
Dabshid aan Ku weydiiyee ,adigu waxad sheeganeysaa iimaamkii hiraab,ee ma ii sheegi kartaa sababta aad u mideyn la’dahay,habargidir oo sadex meelood u Kala jabsan?
Saaxii farmaajo waxba ha eedayn,rag ka horeeyay baa u taag waayey soomaalidan
Lkn Habar-Gidir ma diidana in laga maamulo Villa Xamar
Farxiyooy waad ogeyd FIQI ayaa ugu mucaaradsanaa Habar-Gidir hadan markuu KHEYRE TAGEY GALKACYO CALANKA AYUU U LULAGAYEY,
MARKUU TAGEY Dhuusa-mareeb habeen madow ayuu XAAF QARAABTE u cararey Cadaado, markuu maqley KHEYRE AYAA CADAADO U SOO SOCDO wuxuu uga hortagay oo saacado jidka taagnaa GALINSOOR QURACEEDA.
– HG dhexdeeda ha isku mashquuleen lkn ma diidana in la maanulo oo TURUBKA LOO BAANDHEEYO.
Farmaajo lagama yeelahayo Villada ayaan jiifahayaa, waa inuu HABEENO SOO SEEXDO Kismaayo waliba uu dhaho maamul mideysan dhisa meesha ha igu ceebeynina.
Wuxuu xilka la wareegay Governor Gaas oo Bunka Villada dubo, Axmed Cadde xadreynhayo
Maxaa ku xigtey iney GAAS IYO AXMED MADOOBE Villada lugta soo dhigin 3 sano.
Waxaas marmarsiyo uma noqoneyso RAIISKA, meesha waxaa lagu joogaa 4 5, waa inuu QAARAN IYO MIDNIMO KA KEENO REER TOLKIIS.
Lkn iney kasii xagmaraan meeshay joogeen Waqtigii Xassan Shiikh maahaan waxaan fileynay ama laga yeelahayo Mr Farmaajo CULUSOOW GARGUURTE HURDAAYE.
Waqtigii xasan sheeikh,Askari ayaa Madaxtooyada ku dilay Sargaalkiisii.
Askartu wax lacag ah may qaadan jirin,6,bilood,9 bilod ama sanadba.
Askarigu wuxuu maqlay in bishan dhamaatay la qaatay lacag,laakiin isaga wuxuu ku jiray koox laga aamusay.
Saaxiibadii ayaa u sheegay in shalay lacagtii la qaatay.Waa run dadku ma wada qaadan laakiin dadka qaarkod ayaa qaatay.
Askatrigii wuxuu u tagay Sargaalkii qaabilsnaa lacagaha.
Lacagtaydii ii i sii.
Sargaalkii, sorry lacag lama ahayo waa la sugayaa.
sanad iyo badh ayaad i leedahay lacag ayaa la sugayaaye i sii lacagta.
Askarigii oo hadalkiisa sii wata ayaa ayaa yidhi,waan maqlay oo saxiibkay wuu qaatay lacagtii oo dad badan ayaa ii sheegay in lacagtii la qaataye i sii lacagta.
Sargaalki,waa been lacag cid qaadatay ma jirto.
Askarigii,cadho ka badatay ayaa sargaalkii ku faaruqiyay rasaastii.Albaabka ayuuna ka baxay.
Xasan sheekh Ciidankii madaxtooyada ayuu ka adkaan waayay inuu siiyo lacagtoodii yarayd.
Hawiyaha fashilmay Kablalaxa ayay hoostagaan.
Waxay qaadayaan,Axmed Madoobe ii geeya.
Gaas markuu tegayey dfs, looma ogoleyn iney tagto garoowe,markii doorashadii lagu Kala baxay buu wanka macashaweyni,ogolaadey iney caleemasaarka ka qaybgalaan.
Dabshid waan kuu sheegay caqabada hortaagan farmaajo,laakiin adiga waxaagu waxa weeye”nin meeli u cadahay,meeli ka madow”.
Dabshid xaaf haduu dariiqa u taagnaa kheyre,maxaa hadana kelifay inuu soo laba kacleeyo, oo ka baxo waxay Ku heshiiyeen.
Kkkkkkkkkkkkkkk.madoobe ii geeya.
Dhariga dabka saaran. Wax halagu darsado. Ama haleeskaga dhex boxo madaxda iyo shacabka canshuurta dhiibo.
Qof walbo waxaa la gadboon dharagi uu wax ku darsado in uu la xisaabtamo.
Nin walba dherigiisu Ku filan,ee idinku meel isugu baydha.
Hadaad maarmi kartaan waa leydinka maarmikaraa.
Canshuur baad ka hadleysaae,adduunyada waxay MA siiso deeq idinkaa liqa.
Garqaad maanta keliya Jamalka u shubay dowladda Khayre 379 million dolar.
Ma caruurbaad u sheekaysaa?
Hawiye dhulkiisa Alshabaab canshuur ka qaada dowladda shilin kama qaado hal dukaan.
Bal Mooryaankaan Filish canshuur bilaabo la sugin ileen asagaa sida mooryaan loola xaalo yaqaane oo dadka in dhulkooda ku dhistaan xoogooda bartaan.
Haddaan la isku tanaasulin waa ninka dal iyo dad la’aan hayso.
Aniga yaan Baraxley la isoo dhaafin.
Qaata Xamar bal cidda usoo bariisdoonata.
Waa dhammaatay waagii gobolada laga bililiqaysan jiray qpfka aqoonta leh ama gabadha qurxoon.
Federal waa tartan gobolada in ku tartamaan horumar.
Cidna ma hor istaagi karto oo waa lagu najaxay.
Maanta Bossaso Raxanweyn ayaa difaacan hantidooda inta Majeerteen la gaarin.
Boowe dib loo noqon maayo.
Dal wada nool oo meelna gaajo iyo amni daro ka jirin oo qofna xaquuqdiisa muwaadin lagu xad gudbin ayaa loo socdaa, waana federal system.
Aniga ayaa iri, ma i taqaan iyo amar kutaaglayn waa dhammaatay.
New era for Somali People.
Dad xor ah ayaa dal xor dhisi kara.
Mideeda kale Puntland waa ka kortay kana waynaatay meel shaqsiyaad is haysta ku khalkhasha.
Waxaas waa ka gudubtay, xitaa hub la isku qaatay oo Cadde iyo Cabdulahi Yusuf AUN labadaba is Cayrsanaya Somaliland isla galeen.. kkkkk
General Muxyadiin badda Eyl soo celisay..
Galan guri kasoo bixi waayey.
Alshabaab 500 nin gaara, hooyadood aroos arkeen…
Puntland dhidibo adag ku taagan tahay..
Ha karaamo seegina dhulkaas habaar lagu kari waaye.
7da ciidan puntland waa kala madax banaan yihiin mid haddaad la hedhiiso 6da kale yaa celin.kkkkkkk
Kkkkkkk waa saacadii faanka .
Todobo ciidan oo Kala madaxbanaan,oo hadii Farxiyo rash Ku tuurto,kabaha ka ordaya.
Bal noo sheeg tuulo Majeerteen oo cidi wax u yeeriso.
Somalia bar ma in faataxo ku qaatay ayaa mooday…
La ogaayoo Darood gun ahaan lahaa Dhabayaco la’aanteed…
Ogow in Isaaq kuu laaluusho in ogyigiin cidda Bari ka xigta, yaaba miis kaaga yeeri lahaa?
Walle dabaal baa tahay haddaadan taas ogeyn. 😎
Maxaad u diiday 7bada Ciidan ee kala duwan ee Puntland?
Ciidanka Cirka oo Buuraha Xargaga kkk
Walaal ciidan ma jiree,waa kuwa aradaaga gabdhaha ugu faana.
Haduu taayir/shaag qarxona,deyrka ka booda.
Haddaan kawado maxaad Sool u tegi weyday dee Sool ninkii lahaa oo xabad kugu riyada, maxaan ka doonin duurkaas cidlada oo geela ku raacataan ugu dhiman..why ugu dhiman.
Haddaan kawado maxaad Sool u tegi weyday dee Sool ninkii lahaa oo xabad kugu riyada, maxaan ka doonin duurkaas cidlada oo geela ku raacataan ugu dhiman..why ugu dhiman.😆
Maanta waa qabyaaladaynayaa….
Car Ahmed Madoobe yaa juuq u yiraada.
Haddaan ammaan la siin dowladaan hogaamiyo daanyeer Khayre oo Wardhiigley moos ka xadi jirey iyo Farmaajo oo kuleejada ciyaalka Boonkay oo Baydhabo ku taal buleendo ku cuni jiray, kkkkk
Villa Ugandishu ku ekaandoonaan inta waqtiga uga hartay.
Cidna far uguma yeerikakraan..
Meeshaba nidaam Puntland laga keenay ku joogaan..
Waa in runta la isku sheego.
Ma dhalane bood boodi okaa. kkkkkk
Xitaa hawada Kismaayo lama mari karo..!
Macal madaxweynihii na baray Farmaajo aka Shariif Tuke, lugta ka xiray .
Yaryar qaylada; waa qaboonada…run
Adiga maxaa kaa galay Axmed Madoome?
Yaaba wax kaa waydiinaya waxa laga yeelayo Axmed Kaare xambaar?
Waa maahmaah reer Mudug…
“Yaryar qaylada; waa qaboonada…”
Macnaha marka wareeraan oo gaajoodan oo fahmaan in jidka dheeryahay oo meesha ciddii degtay oo loo guuray.
Mqrkaas miskiin noqon.
In N&N in is cajabiyeen sida dalka in xoog, millitary kuup, que de ta, ku qabsadeen. run
Somali aniga waan darsay waxaa isku haystaan= waa qab.
Walaahi xalka wuxuu ku jiraa: in qofwalba aqbalo in cidna ka gobsanayn oo ka futo madoobayn oo walaakalkaa yahay.
Aniga beeshayda oo isla kibir badan iyo Majeerteen iyo inta madaxmadow ka baxaan oo madhibaan madax ka dhigtaan…
Waa dantooda sinaanta Somalida.
Sweden degenahay markay heshiin waayeen nin Faransis ah boqor ka dhigteen.
Inta taas la fahmin dee, dee isku booteeya..
Aniga var Baraxley isoo dhaafa…kkkkk
Waar niyow sidani ma kaa doqnimaa,ma kaa ……?
Anuu waa garan waayay wax aan kugu macneeyo runtii.
Somaliya maba laha dawlad.Ha ahaato mid Democracy ah,ha ahaato mid uu higaamiyo ama mid Boqrtooyo.Somaliya waxba kama jiraan.Waa bilaa nidaam Somaliya.Waa meel cidlo ah oo la yidhaa,wadan aanay cidi lahayn.
Cidii doonta ayaa iska soo gasha.Cidii doonta ayaa wax ku disha.Cidii doonta ayaa wax ka qaadata.Dadka qaate,xoolo qaate,kakuun qaate,Ugaadh qaate,macdan qaate kkkk
Waa meel cidlo ah ooo aanu ka jirin nidaam dawladeed.
Waxaa jira isku day yar oo la rabo in Somaliya wax loo laaqlaaqo.Wixii yaranaa igaba ayaanu kaba socon nayn.Saa waa dad dhaqan ahaan fawdo u dhisan oo neceb nidaamka iyo kala dambaynta.Waa dad noocaasi ah oo buburiyay wixii ay dhaxleen Gusaytihii u dhisay dawladnimada.Waliba 10 sano barayay sida laysku maamulo.
Adna waxaad ka sheekaysaa in Formaajo yahay dictator.kkk
Waar ma caadi baatahay mise waxbaa kaa qaldan?
Mise waxaad iska jeceshay inaad wax caaydo?
No ma’s land ayaad ku sheegaysaa inuu Dictator ka jiro.
Malaha waxaad ka hadlay Jibuuti.
Coup de’atat sida loo qoro ma aqoon, waa iska qiyaastay. Thanks.
Afsomaliga waa jajuub iyo awooda dalka oo qori caaridiis lagu wareego.
Ninka taas rabo maaha wadani in dal sharaf leh caruurtiisa uga dhinto.
Aniga daanyeer Somali civilan politians iska dabo wareegta ayaa ii dhaanta dictator lagu daba faylo oo laga baqo.
Waayo daanyeertaan badan can’t commit great damage for the nation.
Laakiin uncheched powerful man can destroy a continents or whole nation, wadan dhan dhulka la geli kara..
Hitler, Gingis khan..Kambodia-Comerouj Idi Amin Dada, Jim BedelBokasa, Misgust Xayle Naetam, Khaddafi, Saddam or Xafid Al’Asad or Siyaad Bare etc.
What they left for their country. Blood.
Dictator ayaaba helikara kk
Somaliya ayaanba u malaha inay hesho Dictator.Shaqo ayayba kala yeelan lahayd oo suuqa ayay kala gali lahaayeen.
Haatan,ninkii doona ayaa iska soo gala oo wuxuu rabo ka sameeya.
Biyaha ayaa loo qaadaa kk
Ragbaaba biyaha u sida.
Coup d’etat.Afsomaliga waa Afgambi.Dawlad la inqilaabay.
Adigu daanyeer baa tahay, kkkkkkk
Waxaad sugeysaa dictator Iidoorka sidii Siyaad Bare madaxa ka tuma oo kaa dul kiciya.
Qaranimo iyo horumar Somali ma rabtid ee Hargeysa in Awadal laga xukumin dagaal ugu jirtaa.
War cago dhigo, Bayle wuxuu lacag xaday Hargeysa 7 dabaq ka dhistay.
Hadduu run sheegayo muu Xamar ka dhisto..
Allow iga cafi waxaan dambi galay.
sxb aduu waxaad tahay Badow ay qabyaalad kaga dhegtay.Idoorku waxay ka mid yihiin dadka Somaliyeed ee aan rabo inay dawlad yeeshaan.Waxay ka midyihiin dadka Somaliyeed ee cadilan.
Maanad daawanin iyaga ka sheekaynaya diyaarad Tulo iska soo gashay oo wax ku riday kkkkkkkkkkkk
“Aaardee,xalay ayay diyaarad joog hoose ku socotaa na dul martay,dee haldhan ayay ku riday waxaa aad arkaysaan.Dee lama yaqaan meel ay ka mid”.
beer qudhmay ayaa wajaale lagu qabtay kkkkkkkk
Idoorku waaba dadka ugu daran ee aan rabo inaan dawlad u dhiso.
Beer qudhmay oo Ethopiya laga keenpo ayay ka dhergeen kkkk
Boxyo ayaa lagu soo qaadaa kkk
Idoorba ha noqdo ninka Somaliya maamulayaa,laakiin waxaa la rabaa in sida Aadamaha loo noolaado.
Aduu xataa Daayeerka waad ka hoosaysaa aqli ahaan.
Ninkan Formaajo ee Guriga ku xidhan ayaad ku sheegtaa Dictator kkkkkkkkkkkkk
Waar niyow waxaad tahay shaqsi aduunka kale ku nool.
Aayaan dhawyd waxaan ogaaday in aanad ficradba ka hayan waxan la yidhaa Federalka ee ku hadaaqdo.Haatan waxaan ii cadaatay in aand fahansanaynba waxa la yidhaa Dictatorka?
Saa nin Misgiin ah oo Villa Somaliya ku xidhan ayaad leedahay waa Dictator.
Mida kale,aduu waxaad rabtaa inaad hesho meel aad Tegree,Amxaar ama wixii ay Somaliya isku dhacaan ugu niikiso intood dhexda soo xidhato sidii caadada kuu hayd.kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Yaa Amxaar biyo daba qaaday.
Adiga Puntland baad ka hadlaysaa walaahi in Killilka Somalia Ethiopia from Galadi, Dhudub, Bookh Dameerjoog ilaa Wadheer wax loo yeerin Ethiopia oo Puntland toos ugu xiran..
Xuduud beenaad waxaan ka dhignay xuduud beeraad run ah.
dhulbahante wareersan Farxiyo ugu horeysa, waxay rabto bal adba garo.!
Tolkaa, gobolkaaga macal Khaliif ma rabtid, Somalia waa in system ku jiro, xageed ku jirtaa.
Haddii Khatumo la aqoonsado in ku dabafaysho amba waa rabaa, laakiin khatumo hal gobol oo kekigoodcdegaan keeni waaye.
Ka waran haddii Wardheer Cagjar iyo Ethiopia laga hadlayn ee Deni looga hadlayo.
Dad midaysan cidna ma celin karto.
Qabyaalad maaha, runta kuu sheegay in Somalia gobolada laga soo dhiso la gaaray.
Hargeysa ama Borama ma dhisi karto Xamar oo ayaga aminigoogii u dhiibtay Amisom.
Daanyeer aduun la socon ayaa tahay.
Gobolkaaga rag u noqo oo wax soo saaro ama waa lagu yeelan sida naag la qabo.
Xitaa Isaaqa wax laqaybso…😤
Mise nin qabiil hadda lagu daray uu ahaan jirin ayaa tahay oo farxad burursan.
Goorma ayaad taas fahmin.
Qabiil maxaa la yidhaa?
Maad ii sheegikartaa cilmiyan waxa la yidhaa qabiilka?
Waan hubaa oo ma garanysid.
Wax lagugu yidhi ayaad ku socotaa.
Aniga qabiilkaygu waa Somali .Waxa kale waa been.
Adigu iska hayso waxa laguu sheegay ee Jabarti.Anna waxan kugu dhaaran in aanay waxba ka jirin waxaa lagu seegay.
Wax faaiido ahna qabiil ka aad seeshayso lagama gaaadhin.
Laba shay ayay Puntland ku nooshahay.
Dikada Basaso iyo Laamayga dheer ee dhulkiina isku xidha.Labadaana waxaa dhisay qaran Somaliyeed.
Qabiilka aad sheegta 30 sano ayuu ceel u qodiwaayay dadka reer Garoowe.
Dee qabiil haduu wnaag kuu hayo,iska hayso kkkk
Waxbaa dhsimay iyo waxbaa loo yeedhiyay ayay kaaga dhegtay.
Waar aduunku hore ayuu usocda.Tii oo aanu qabiilba la adeegsan.
Aduu waxaad leedahay qabiil la’aantii ma noolaankaro.